परमाणु युद्ध भए के हुन्छ ? आणविक हतियार भएका १० देश, को कति शक्तिशाली ? Arthadaily: Search for truth and fact.
प्रकाशित: २०७६-१०-१३ गते
यो त भयो धेरै बर्ष पहिले भएको युद्ध ? अबको संसार ऊ बेलाको जस्तो रहेन,अहिले बिकासको क्रमसंगै प्रबिधि,आर्थिक,सामाजिक र सामरिक शक्ति समेत धेरै बलियो भएका छन् । अब तेस्रो विश्व युद्ध भयो भने के हुन्छ ? के अबको युद्धमा पनि परमाणु बमको प्रयोग हुन्छ ? हो प्रत्येकको मनमा यहि प्रश्न उठ्दछ ।
रक्षा बजेट - $ ४४ बिलियन
top 10 power country